China FOTON C6 EVFOTON C6 EV fekitari uye vagadziri | Foton
Foton C6 EV bhazi reguta rinoratidzira "micro-kutenderera" bhazi pfungwa iyo inodimbura yakanaka chimiro mumigwagwa yemumigwagwa iri pakati peguta mabhuroko kana nharaunda, kugadzirisa vagari vemudhorobha 'dambudziko rekufambisa re "mamaira ekupedzisira", vachiona kubatana kusina musono pakati pechiteshi chechitima uye munharaunda, iyo arterial mugwagwa uye nharaunda.
Kunopindirana Dimension 6530 * 2230 * 2800
Kurambidza Kurema 5.9 / 6.2T
Passenger / Seating Kugona 36 / 11-17
Passenger Door Mumwe musuwo-unofamba
Foton C6 EV bhazi reguta rinoratidzira "micro-kutenderera" bhazi pfungwa iyo inodimbura yakanaka chimiro mumigwagwa yemigwagwa iri pakati peguta mabhuroko kana nharaunda, kugadzirisa vagari vemumaguta 'dambudziko rekufambisa remamaira ekupedzisira. Nenhau uye yakasarudzika dhizaini, inoratidza kuve nyore uye kubatana, zvichitungamira fashoni ye "micro-kutenderera" bhazi.
Foton C6 EV bhazi reguta rinoratidzira "micro-kutenderera" bhazi pfungwa iyo inodimbura yakanaka chimiro mumigwagwa yemumigwagwa iri pakati peguta mabhuroko kana nharaunda, kugadzirisa vagari vemudhorobha 'dambudziko rekufambisa re "mamaira ekupedzisira", vachiona kubatana kusina musono pakati pechiteshi chechitima uye munharaunda, iyo arterial mugwagwa uye nharaunda. Nenhau uye yakasarudzika dhizaini, inoratidza kuve nyore uye kubatana, zvichitungamira fashoni ye "micro-kutenderera" bhazi.
Permanent magineti synchronous mota
Yakashongedzerwa neepamberi yakazvimiririra mota inodzora system, iine makore ekutengeserana mashandiro.
nenguva yekuchaja maminetsi gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu nguva imwe neimwe, uye rwendo rwekuchaja rwemutero wega wega rinosvika pamusoro pe150km, ichichengetedza mafuta emutengo unosvika ku80,000 RMB gore rega
Foton Inobatsira vanogadzira kuti vagadzire rakaringana mashandiro ehurongwa nenzira dzeMotokari inoongorora kutenderera uye Ongororo yekuvaka zviwanikwa, kusanganisira zvinotevera zvinhu zvine mutsindo: bhazi modhi, yekuchaja modhi, mutengo pachikamu, mileage / zuva, nezvimwe.
Foton inopa vanogadziridza mitsara kuronga zvine chekuita nemota dzekushandisa modhi, senge Guta diki-repakati saizi.
Kuburikidza nekuratidzwa kwemotokari, kudzidziswa kwevashandi, kutungamira kwekutungamira kwechikwata, Foton inovavarira kuisa pamberi payo mazano uye mhinduro kune vanoshanda. Chikwata chekushandisa kutungamira: Stop chiteshi chekuvaka chirongwa; Fleet manejimendi kudzidziswa, kusanganisira mota nguva nenguva yekuchengetedza; Simba rekushandisa manejimendi; Imotokari inoronga kudzidziswa, senge yekuenda nguva zhinji; kudzikira kwakachinjika hurongwa & kure kure kuronga mota. Kuratidzira Kushanda: Vashandisi 'Vanoda kuongorora; Zvigadzirwa mhinduro kuronga; Mharidzo & yekuratidzira mashandiro; Kuongorora dhata & kuongorora; Ekupedzisira optimized mhinduro. Kurovedzwa kwevashandi: NEV ruzivo rwekutanga ruzivo; Kugadzirisa uye kugadzirisa & kukanganisa kuongororwa chirwere; Kutyaira hunyanzvi kudzidziswa.